Ejipta: Ilay Famonoana Ireo Sodaney Mpitsoa-Ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2017 7:33 GMT
Mijanona ho adihevitra mafana eo amin'ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana ny fiafaran'ilay fitorevahana Sodaney nihoson-drà sy nampivarahontsana. Firotsahana an-tsehatra iray hafa nahery vaika nataon'ny mpitandro filaminana izay tsy haiko tantaraina satria manaporofo amintsika fa miaina ao anatin'ny fanjakàn'ny mpitandro filaminana maivandoha i Ejipta. Miaina ao anatin'ny fanjakan'ny mpitandro filaminana i Ejipta ary mbola loza hafa foronin'ireo jiolahimboton'ity fitondrana ity izany. Tsy hajain'ity fitondrana ity ny olona, ny olom-pireneny sy ireo mpitsoa-ponenana sasantsasany tsy afa-manoatra.
Nefa valian'i Ta3zeeb tsirairay ireo lainga rehetra aparitaky ny haino aman-jery sy ny gazety ireo.
Tsy hiala tsiny amin'ilay zava-nitranga ny Praiministra Ejiptiana fa ireo mpitandro filaminana naratra ihany no novangiany. Na nisaotra an'i Ejipta noho ny faharetany nandritra izay ela izay aza ny governemanta Sodaney.
Namoaka angon-tsary tahiry marobe avy amin'ny haino aman-jery sy loharano hafa ny Egyptian Conscience. Indreto ary ireo sary vitsivitsy an'i Elijah sy Youssef.talohan'ny vonoan'olona .
Fanontanian'i R : iza no mavesa-danja kokoa ny sarin'i Ejipta sa ny ain'ireo Sodaney mpitsoa-ponenana ? Fanontaniana napetrany taorian'ny fihizingizinan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny Firahalahiana Silamo hanontany ny governemanta momba ny hetsika nataony izay nanimba ny sarin'i Ejipta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Hetsika roa fanehoana hery no nokarakaraina teo amin'ny toerana izay nisehoan'ilay vonoan'olona tamin'ny 31 Desambra 2005. Nikarakara hetsipanoherana omaly ireo vondron'ny mpitoraka bilaogy. Tian-dry zareo ny hijoro isaky ny alakamisy hanohitra ilay hetsika.
Taterin'i Elijah ny momba ilay zava-nahatsiravina niseho sy ny fanavaozana ny kabinetra farany teo.